Iveki yokulinga phakathi kweMidlalo ye-Epic kunye neApple. Isishwankathelo sokwenzeka | Ndisuka mac
Iveki yokulinga phakathi kweMidlalo ye-Epic kunye neApple. Isishwankathelo sento eyenzekayo
Ngomhla wokugqibela ngoMeyi 3, Ityala phakathi kweEpic Games kunye neApple laqala. Yonke le nto iqale xa umvelisi womdlalo wevidiyo egqiba ukophula imithetho yeVenkile yeApple kunye nezigqibo abazithathileyo kwiApple emva koko, baphulukene neakhawunti yabo yonjiniyela. Sele sinayo iveki yesilingo kwaye le yeyona inomdla kwezi ntsuku.
1 Amagqwetha ka-Apple athathe iintsuku ezimbini zokuqala zolingo kwigadi yeziqhamo
2 Ukususela ngomhla we-3 ukuya ku-5 wolingo phakathi kweMidlalo ye-Epic kunye neApple, le nto ibingabalulekanga kangako
Amagqwetha ka-Apple athathe iintsuku ezimbini zokuqala zolingo kwigadi yeziqhamo
Yonke le nto iqale ngokubhengezwa kwezi nkampani zombini. Iimpikiswano zokuqala, nganye nganye ikhusela isikhundla sayo phambi kwejaji yetyala. I-Epic ijolise ekuboniseni iApple kunye neVenkile ye App njengesixokelelwano esizimeleyo nesingachasani nokhuphiswano esinganiki zibonelelo kubathengi abakhuthazwa yiApple. Inkampani yokuvelisa inikezele ngee-imeyile ezininzi ezithunyelwe nguSteve Jobs, uCraig Federighi, uLuca Maestri, uTim Cook, uEddy Cue kunye noScott Forstall ngokubhekisele kulwakhiwo lwe-Apple. udonga olungenakoyiswa okunye.
UTim Sweeney, Umphathi we-Epic, wangqina ngemodeli yeshishini lenkampani yakhe, ubudlelwane neenkampani ezinje ngeMicrosoft kunye neSony, nokunye okuninzi. Inqaku elinomdla Kwathi xa uSweeney evuma ukuba usebenzisa i-iPhone ngenxa yokugxila kuka-Apple kwimfihlo kunye nokhuseleko ekuphenduleni imibuzo evela kumagqwetha ka-Apple.
Amagqwetha ka-Apple, kwelinye icala, ajolise kwi izibonelelo abazibonelelayo kubaphuhlisi kumaqonga abo. Oku kubandakanya ukufikelela kwipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda ka-Apple, ezinje ngee-API ezahlukeneyo kunye nezixhobo zonjiniyela. Bajolise kakhulu ekusetyenzisweni kwe-Epic ye-API yemizobo ye-Metal. Inkampani ibalaselise ii-imeyile zangaphakathi ezivela kubaphathi be-Epic abadumisa iMetro. Kwi-2018, i-Epic ikwabonelela ngesicatshulwa seWWDC, ngesicelo sika-Apple, bedumisa uMetro.
Kodwa isitixo ifumaneka kumbuzo olandelayo kunye nempendulo:
Igqwetha le-Apple: Ukuba iApple ibikuxelele ukuba bayakunika isivumelwano kwaye akukho namnye umphuhlisi, Ngaba ngendiyamkele?
Sweeney: Ewe ndingathanda.
Njengoko besitsho, Akusekho mibuzo, Mhlekazi.
Ukususela ngomhla we-3 ukuya ku-5 wolingo phakathi kweMidlalo ye-Epic kunye neApple, le nto ibingabalulekanga kangako
Eyona nto inobuqhophololo kukuba iApple yazifumana iphakathi kwelitye nendawo enzima izama ukuthintela I-Netflix yeka ukuxhasa ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo kwiVenkile yeApple. Umsonto we-imeyile ubonise unxibelelwano lwangaphakathi eApple nje ukuba inkampani ifunde ngezicwangciso zeNetflix. Abaphathi be-Apple kumsonto we-imeyile bacwangcise iintlanganiso ezahlukeneyo kunye neNetflix ukuxoxa ngemvavanyo ezicwangcisiweyo zenkampani.
Ngosuku lwesine baqala ukubalasela amanye amangqina:
El Usekela Mongameli weVenkile yeApple Ucacisile ukuba iApple kudala ijolise kukhuseleko lwevenkile kunye neengcebiso eziphikisiweyo kwizinto ezinjengeendlela ezizezinye zokuhlawula kunye nokukhuphela iiapps. Ujaji Rogers uyiphikisile imizamo eqhubekayo ye-Epic yokwamkela amaxwebhu njengobungqina, ngokusekwe kwizinto ezinje ngokubaluleka kunye namaxwebhu akhankanya umntu wesithathu. Usekela-mongameli kunye namagqwetha akhe bakuthintele ukukuvuma oko unxibelelwano oluthile lwangaphakathi lwe-Apple njengovavanyo. Into ngokungathandabuzekiyo iza kuluncedo kwinkampani yeapile.
Ngomhla wokugqibela wokusebenza kwetyala kodwa kusekho iinkuni ezininzi eziseleyo, uTrystan Kosmynka, eneenkcukacha zokuba zizigidi ezi-5 zezicelo ezithunyelwa kwiVenkile ye App minyaka le Ireyithi yokwala isicelo ingaphantsi kwe-40%. Ngo-2019, ii -apps ezingama-4.808.685 zangeniswa kwinkqubo yokuphononongwa kweSitolo, kwaye iipesenti ezingama-36 zazo zaliwa. Kweziapps zingafunwayo, malunga ne-215.000 yephule imigaqo yabucala ye-Apple.
Okwangoku "chicha" encinci kodwa ayikachukumisi iinkampani ezinkulu ukuba ziye kubhengeza. Sihlala siphaphile kuba eli tyala ingatshintsha kakhulu kwiApple ke ngoko kubasebenzisi bezixhobo zeapile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Iveki yokulinga phakathi kweMidlalo ye-Epic kunye neApple. Isishwankathelo sento eyenzekayo
Namathisela i-AirTag kwi-Siri Remote kwi-Apple TV ukuba unayo umshicileli we-3D